Ukwamukelwa Okufudumele e-Hillview Dairy
Ibekwe phezu komugqa omncane we-ridge, i-Hillview Dairy, ngo-1887 ibheke i-Mt Tallebudgera emangalisayo, i-Currumbin Creek ne-Valley landscape. Iminyaka engaphezu kwekhulu i-Old Dairy Bales ihlezi njengengxenye yendwangu yepulazi elikhulayo leDairy eGold Coast Hinterland emangalisayo. Izungezwe amahektha eNational Parks. Kuyisinyathelo sesikhathi esedlule, umoya opholile, ngenkathi uqinisekisa ukuthi useyinqola kuzo zonke izindawo ezikhangayo nobukhazikhazi beSouthern Gold Coast kanye neByron Bay.
Siyakwamukela ku-Unique Curated Coastal Country Experience yethu.
I-QANTAS TRAVEL INSIDER MAGAZINE 2021
I-COUNTRY STYLE MAGAZINE Agasti 2020
I-GOLD COAST BULLETIN Agasti 2020
UHLU LAMADOLOBHA - I-Airbnbs eyi-12 yezilwane ezifuywayo ezihamba phambili ezinobungani
PRIMER Mashi 2021 Izindaba
UMAGAZINI OHLANGANISIWE OMNCANE March 2021
Impilo engajahile Blog
Hlala kuBush Blog
I-VLOG YOKUHAMBA: I-PIA NO-KANES AMA-AUSSIE AMAHLE EZINKULU
Sicela uqaphele- Ibhuloho le-Boyd’s elingokomlando elisekhoneni lendawo yethu lizoshintshwa ngo-Jan 2022. UMkhandlu usitshele ukuthi ukuphazamiseka kuzoba kuncane.
I-Dairy "ayixhunyiwe" ngempela -Sicela uqaphele ukuthi i-inthanethi/i-wifi AYISEBENZI kahle eDairy. Ayikho i-NBN. Sisanda kufaka isathelayithi ye-sky mesh. ISEBENZA KAHLE KAKHULU futhi ingayeka. Ukwamukela ifoni kwe-4G nakho kulinganiselwe kakhulu.
UKWENGEZA OKUSHA! Sisanda kufaka indawo yokubhukuda yesitayela se-rustic/yewayini yokubhukuda. Ngengemuva elimangalisayo lokhahlamba lwezintaba indawo ekahle yokuchaphaza!
I-RETRO CRUISER BIKES-
Hlola isigodi, izimpophoma, amachibi edwala nezimakethe eziseduze ngamabhayisikili ethu e-retro cruiser- obhasikidi abalungele izimpahla zakho.
Sicela uqaphele- Okukhethekile- Ukubhukha kwempelaviki “kokubili” NgoLwesihlanu/NgoMgqibelo ebusuku - Ukuphuma kwasemini ngeSonto kwakusihlwa . Jabulela iSonto eliphumulele eDairy.🙂
Ukuze sigcine izintengo zethu ziphansi futhi ngaleyo ndlela zifanele ukuphunyuka kwezithandani simise isistimu yokubhukha yamanani ezivakashi ezingu-2. Kunenkokhiso eyengeziwe yezihambeli ezingaphezu kwezi-2. Sicela ucele inani eliqondile lezihambeli efomini lokubhuka.
Izivakashi zethu ezikhethekile zinethuba lokukhululeka endaweni ethokozisayo ngejubane lazo. Uma ubheka ukuzwa impilo yase-Australia, ukunethezeka ezweni, ukuhlanganisa ipulazi langempela lokusebenza nolwandle emnyango wakho wesinyathelo khona-ke yilapho uzoyithola khona.
I-Old Dairy yayakhiwe ngokuyinhloko ngezingodo ezisahwe ngesandla ezivela ehlathini elizungezile. Ibuyiselwe ngokucophelela endaweni yokuqala, ngokuziphatha nangokuqhubekayo kusetshenziswa zonke iziqephu zokhuni nezici zangempela. Njengoba i-rustic gentility, i-Hillview Dairy iyindawo yokubaleka, indawo yokuxhumana, indawo, indawo , indawo ongacwiliswa kuyo......ukuletha emhlabeni kusukela ezimpilweni zakho ezimatasatasa. Yithuba lakho lokumbiza ngekhaya.
Ngenkathi ingekho kugridi... I-Hillview Dairy ihlanganisa zonke izici eziphambili ezilindelwe endaweni yokuhlala esezingeni eliphezulu. Isitezi sikakhonkolo esiwashisiwe esimhlophe sihuqwe ngomata bengcweti - balukwe ngokuqhubekayo nokulula nokulula kokuziphatha.
Bespoke art kanye vintage
ifenisha , okuhlanganisa ubhavu wangaphandle wase-Europe wokugezela kanye nempahla kampompi eyenziwe ama-artisan endawo zonke izici eziyingqayizivele ongazijabulela. Isibaya esidala siklanywe ngokomsebenzi ngobuhle be-rustic yezimboni. Izici zifaka amaqoqo nama-vignette akhethekile avela emhlabeni wonke..amadala namasha.
Izinto zikagesi zasekhishini zonke ziyi-SMEG ye-retro ehlanganisa umshini wekhofi we-SMEG onekhofi eliphilayo, elitholwe ngokokuziphatha elinikeziwe.
I-BBQ -Ziggy Ziegler kanye noBrown
I-ROCCBOX PIZZA OVEN - GOZNEY (igesi ye-pizza elula efakwe ngokhuni)
I-Dairy manje iyachuma njengengxenye ye-Hillview Homestead okwamanje esebenzisa i-Pure Breed Black Angus Beef Stud. Indawo ikhiqiza “i-paddock to plate” esezingeni eliphezulu efunzwe utshani be-Hillview Premium Black Angus.
Balekela amahhotela ezinkanyezi ezi-5 futhi ujabulele ukunethezeka nokunethezeka okufanayo njengendawo yasendaweni kulesi sikhala esikhethekile. Ebusuku obubandayo basebusika buzigoqa phambi kweziko futhi ngezinsuku ezishisayo zasehlobo ujabulele ukuntweza emanzini emabhishi asendaweni okulandelwa ukucwiliswa kusihlwa ezimpophomeni namachibi aseduze.
Ukuziqhenya ngemibono emihle, iyindawo ekhethekile, eyingqayizivele yokujabulela ukuthula nokuthula okufanele sikunikeze isigodi sethu sase-Hinterland. Nethezeka, buyisela futhi uxhume kabusha ... Ukhetha ukuphunyuka futhi I-Dairy izokusonga izingalo ....
Ngenkathi umndeni wethu uhlala e-Hillview Homestead, ubumfihlo bakho obuphelele buyahlonishwa futhi buqinisekisiwe. I-Dairy inomnyango wangasese futhi itholakala kude neHomestead kanye namagceke ezinkomo ezisebenzayo. Indlela yethu enkulu yokungena idlula ngaphansi kweDairy.
Umphathi wethu wepulazi angase abonakale emadodeni esebenza nemfuyo. Ungase ubone iloli le-hay lidlula, ngaphandle kwalokho, uqinisekisiwe ukuthi awuboni lutho ngaphandle kwesibhakabhaka esiluhlaza, ama-silhouette asezintabeni kanye nama-scapes aluhlaza.
Kwesinye isikhathi, i-Hillview Homestead iyiholide eya ezivakashini. Uma kunjalo sizokweluleka.
INKONZO YASE-POOL - Uchwepheshe wethu we-pool onobungane uzosevisa ichibi masonto onke ukuze aqinisekise ukuthi lisesimweni somkhumbi wezivakashi zethu. Sizama ukuhlela lokhu phakathi kokubhuka kwezihambeli, nokho, ngezinye izikhathi angase avakashe sibe sinezivakashi. Uvamise ukuba sesayithini imizuzu eyi-10 futhi ukuphazamiseka kuncane.
UKUTHOLAKALA KWENDAWO YOKUQASHWA/IFILM :I-Dairy endala iyindawo ekahle yokuthwebula imfashini/i-homeware, ukuhlela, ifilimu ne-TV nezithombe zomshado. Siyajabula ukuxoxa ngezimfuneko zakho. ZONKE IZITHOMBE ZANOMA YILUPHI UHLOBO KUMELE KUXOXWE NOMNIKAZI.
SOCIAL MEDIA- Samukela abadali/abagqugquzeli bokuqukethwe. Sikhuthaza ukukhuthazwa komkhiqizo wakho. Sicela uxoxe ngezidingo zakho ngenhlonipho nomnikazi uma inhloso yakho kuwukubhukha iDairy ukuze uthole ukusebenzelana komuntu siqu/kwezohwebo kwezokuxhumana.
UKUQASHWA KWEMOTO: “Umshini Oluhlaza”, 1996 iLandrover Defender iyatholakala ukuze uqashwe ngesikhathi uhlala. Ilayishe ngamabhodi akho okuntweza kanye namathawula olwandle futhi iyimoto ekahle kakhulu “yeFarm to Beach”. 7 ebusuku min.
( Ukudluliselwa Kwesikhumulo Sezindiza saseGold Coast Kungase kutholakale)
I-PETS WELCOME- nokho, sicela uxoxe nomnikazi ngaphambi kokubhuka. Izilwane ezifuywayo zizocatshangelwa icala ngalinye. Sicela ubheke idokhumenti ye-HILLVIEW DAIRY PET POLICY enamathiselwe ngezansi.
IMICIMBI- Yonke imicimbi kufanele ididiyelwe ngo-Rachael wase-The Events Lounge Gold Coast.
IZIVAKASHI EZENGEZIWE- Isilinganiso sasebusuku seDairy esabantu abadala abangu-2. Igumbi elilodwa lokulala. Uma ufisa ukumema izihambeli ezengeziwe sicela ucele lokhu ngefomu lokubhuka. Sizobe sesiqinisekisa ukuthi igumbi lesibili lokulala livuliwe futhi liyatholakala kubavakashi bakho.
IZINGANE zamukelekile. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi kunemigudu yamanzi engabiyelwe- AmaCreek namadamu kule ndawo yasemakhaya.
Iminyango yengobo yokuqala yeminyaka eyi-100.
Umpheme omkhulu oheleza umoya onezihlalo zetafula zikakhonkolo ezenziwe ingcweti ezinkulu eziyi-10.
I-Bespoke yokhuni ejikajikayo yesandla esahwe futhi yenziwe ngesandla kusukela ku-Dairy Bales yasekuqaleni.
Ikhwalithi ephezulu yelineni yokunethezeka namathawula.
Okubalulekile kwekhishi kuhlinzekiwe. (izinongo, amafutha omnqumo, ikhofi letiye nokunye)
Umgodi womlilo ongaphandle obheke ukubukwa kwe-hinterland (sicela ubheke imikhawulo yendawo yomlilo)
I-FIREWOOD inikezwa ngokunethezeka phakathi nezinyanga zasebusika.
(Sicela uqaphele igumbi lokugezela okuwukuphela kwalo elingenwa ngaphakathi kwelinye lamagumbi e-King futhi liyatholakala nangaphandle ngovulandi)
Inqubomgomo ye-Hillview Dairy Pet
I-Hillview Dairy iyisethi ephelele yezilwane ezifuywayo. Uvulandi mkhulu futhi ubiyelwe izilwane ezifuywayo- kukhona nengadi ebiyelwe ngokuphelele.
Kwa-Hillview Dairy siyaqonda ukuthi kubaluleke kangakanani ukuletha isilwane sakho ngamaholide nawe. Wamukelekile ukuletha EYODWA (sicela uxoxisane nomnikazi uma unabangane abangaphezu koyedwa) onoboya nawe.
Kufanele babe -
*Izindlini eziqeqeshwe, zihlanzekile futhi azinazeze.
*Hhayi umdlwane - ubuncane beminyaka yobudala engu-1
*Inja akumele kube uhlobo olumenyezelwe noma olukhawulelwe. Izinja ezinolaka azamukelekile.
*Ezimweni ezilinganiselwe, ngokubona kwethu singavumela inja yesibili, sicela ubuze nathi ngaphambi kokubhukha.
Imithetho yomngane wakho onoboya-
*Ungalali ngaso sonke isikhathi. Kumelwe ube nomama noma ubaba lapho ungaphakathi kwendawo yokulala.
*Kufanele uhlale ngaphansi kolawulo lwakho ngaso sonke isikhathi.
*Kufanele ihlale ngaphakathi kwemingcele yobisi.
AKUMELE uzulazule ngokukhululeka nhlobo. Le ndawo inemfuyo nezilwane zasendle.
*Sicela ungasishiyi isilwane sakho singagadiwe eDairy.
*Sicela uqinisekise ukuthi izinja ezikhonkothayo nezinomsindo ziyanakekelwa.
*Sicela uqinisekise ukuthi ugeza isilwane sakho. Izikhwama ze-Doggie zihlinzekwa.
Sicela uthulule ipayipi futhi womise izilwane ezifuywayo ngemva kokuvakasha olwandle/umfula. Ipayipi liseduze kwethangi lamanzi futhi kukhona amathawula ezinja anikezwe kumdwebo ongezansi wekhabethe lasekhishini.
*Sincoma ukuthi uhlole inja yakho ngokucophelela ukuze uthole imikhaza. Le ndawo iyindawo yomkhaza wokukhubazeka.
*Uma udinga ukushiya indawo ngaphandle kwenja yakho ngenkathi usahlala sicela usithinte futhi sizozama ukwamukela isicelo sakho.
*Sinelungelo lokwenqaba ukulaliswa kwanoma yisiphi isilwane esifuywayo esingahlangabezani nalezi zidingo ezingenhla.
Uma uqinisekisa ukubhukha kwakho futhi uvumelana nemigomo nemibandela ye-Airbnb lokhu kuyohlanganisa ukwamukela kwakho le mibandela engenhla.
Imizuzu eyi-12 ukuya eCurrumbin Beach.
Ukushayela imizuzu engama-25 ukuya eSurfers Paradise.
Imizuzu engama-45 ukuya eByron Bay.
Ukuhamba imizuzu emi-2 ukuya eCafe Harvest.
Ukuhamba imizuzu engu-8 ukuya e-Rockpools.
Ukuhamba imizuzu engama-20 ukuya eNational Park kanye nokuwa kwamanzi.
Sibheke ngabomvu ukwamukela izivakashi zethu e-Hillview Dairy. Nakuba singase singatholakali ukuze sibingelele mathupha zonke izihambeli zethu sisuke sishayela ucingo noma sithumela umbhalo. Sijabulela ukwabelana ngamathiphu ethu endawo. Uma sisendlini enkulu ye-Homestead sijabule kakhulu ukukuvakashela, nokho, ubumfihlo bakho obuphelele buyaqinisekiswa futhi buhlonishwa.
Sibheke ngabomvu ukwamukela izivakashi zethu e-Hillview Dairy. Nakuba singase singatholakali ukuze sibingelele mathupha zonke izihambeli zethu sisuke sishayela ucingo noma sithumel…